Topiary Izigaxa ngezandla zabo. Master class Wabasaqalayo
Topiary futhi Ngamanye amazwi, nomuthi injabulo, namuhla ngesipho esiphuthumayo kakhulu kunoma ubani noma ngasiphi ukugubha. Zenziwa ngezinto ezihlukahlukene: izimbali, ushokoledi, ikhofi okusanhlamvu, napkins. Kodwa kulesi sihloko sizoxoxa ezifana nezithombo yokufakelwa njengoba topiary Izigaxa ka AmaConifers.
Ngezansi kukhona isinyathelo ngesinyathelo wizadi kwekilasi ekwenzeni lolu hlobo umkhiqizo. Ngemva kokutadisha Ulwazi olunikiwe ke, futhi ulungiselele zonke izinto ezidingekayo ukuze umsebenzi, ungakwazi kalula ukwenza ngezandla zakhe manje umuthi injabulo.
Topiary cone. Ukulungiselela
Ukuze womshini izihlahla, kudingeka lezi zinto:
esitsheni (ngengilazi, epulasitiki, ubumba);
kwegatsha noma ngaphezulu kwesihlahla noma izihlahlana;
Izigaxa ka AmaConifers;
tape noma eluka;
fafaza "iqhwa" in the ikani noma isiliva upende.
Ukufunda ukwenza Topiary cone. ekilasini Master
Ukuhlobisa imbiza. Umthamo (okhrophiwe ibhodlela le plastic, i inkomishi endala ngaphandle isibambo, imbali imbiza), ulinganise selilonke futhi ukuphakama. Ngenxa yalezi Ubukhulu ukusika bamboo napkin lendwangu ulinamathisela imbiza usebenzisa isibhamu glue. Burlap ulandele yeviyo mayelana 4-5 ngamasentimitha ububanzi futhi bopha emhlabeni esitsheni. Tie umnsalo phezu eluka noma ama-ribbon. Sithola ukuklanywa kakhulu ebhodweni "ngaphansi kwesihlahla."
Ukwenza umqhele futhi sesihlahla. Styrofoam ibhola legatsha Pierce, ugcwalise umgodi futhi glue stick emgqonyeni. Ungakwazi akhiphe ke emagatsheni amaningana, kodwa akufanele kube uqweqwe. Lapho preform esomile, lunamathele ibhola ahlangabezana ezinabantu komunye nomunye. Penda umqhele izihlahla ngopende esuka esitsheni noma umane ufafaze spray ukuthi kulingisa iqhwa. Shiya umkhiqizo ukuze ome.
Compound izikhala e kwengoma. Sabalalisa usimende ngokuvumelana neziyalezo ezisemakhasini iphakethe uwathele ebhodweni. In the isikhungo, faka ingxenye eyisisekelo (emgqonyeni nge umqhele), ubambe kwamaminithi ambalwa kuze isixazululo Uqinisa kancane. Shiya yezandla ukuze ome endlini efudumele.
Topiary Izigaxa: umhlobiso esiteji. Izikhala phakathi uhlevane ugcwalise fibre sisal noma unamathisele ukuze encane yokufakelwa conifer Amahlumela. Ungakwazi unamathisele walnuts organic noma hazelnuts. Uma induku-isiqu ubukeka ebukekayo ke bopha ne string noma iphepha lukathayela. Gypsum ebhodweni, ukuvala moss yokufakelwa, gluing ke Melt. Ngaphansi kwesihlahla kungenziwa itshalwe inyoni Ornamental noma ukubeka yinhlama encane.
Lapha futhi kuvezwe konke izimfihlo ekwenzeni umkhiqizo omuhle ezifana Topiary cone.
Izithombe evezwa iphepha ukubonisa ukuthi lezi yezandla kungaba hhayi kuphela umumo isiyingi, kodwa futhi ngesimo Isigaxa. Topiary okunjalo sifana herringbone. Ngobusuku obandulela uNyaka Omusha WamaShayina amaholide ke ongayenza ukuze ukuhlobisa ikhaya lakho noma njengesipho izihlobo noma abangani izincwajana. Njengoba a element zokuhlobisa ngokuba umuthi onjalo, sebenzisa encane imihlobiso Christmas, "imvula", amakhekheba eqhwa.
Topiary Izigaxa izigaba izikebhe ngokuthi "vintage." Ukuze yokukhiqiza yabo okungenamsoco futhi izinto ngakwesokunene futhi izipho bemvelo. Une ukuchitha kuphela ngidwebe ngopende kanye nokwenza i-glue. Ukuze imali encane kakhulu uthola imikhiqizo original kakhulu futhi emuhle. Yakha ubuhle ubumnandi!
Kanjani Lizunov ekhaya?
2 imibono emisha: ngifaka ngobuningi ngezandla zabo
Wolf plasticine: izincomo ezimbalwa ezilula
Funny suit-Ephreli 1. izingubo ezihlekisayo ngo-Ephreli 1
Sofiya Suzdalskaya Isithonjana: lokho kusiza?
Likuphi ubende? Ubukhulu: izinga e abadala kanye nezingane
Zizwe ukuwozela ntambama? Lezi amathiphu 12 kuzosiza ukugcina ubungqabavu
Mustai Karimov: Biography nemisebenzi
Wishes zigcwaliseka ngesikhathi sikaKhisimusi. Indlela ukuqhuba imicikilisho yokusebenzelana
Klippel - Feil syndrome: isithombe, ukwelashwa, lokho imiphumela ingase ibe? Sprengel syndrome - Fail - Klippel: izivivinyo e-swimming pool
Izinombolo we amabhola ngezandla zakho